Talyaanigu wuxuu oggol yahay 4 Dhirta Xashiishadda Guryaha • Daawooyinka Inc.eu
Talyaanigu wuxuu oggol yahay 4 dhirta xashiishadda ee guriga lagu beero
Talyaaniga waxay u oggolaaneysaa beeritaanka yar-yar ee ilaa 4 dhirta xashiishadda ah ee guriga lagu beero guriga, ka dib markii dib-u-habeyn lagu ansixiyay Arbacadii Guddiga Caddaaladda ee Golaha Wakiillada.
Madaxweyne Mario Perantoni wuxuu ku dhawaaqay in “beerista wax aan ka badnayn 4 'dheddig' 'dhirta guriga lagu xukumay”, laakiin ciqaabta ka ganacsiga iyo qaybinta xashiishadda ayaa kordhin doonta lix illaa XNUMX sano.
Codbixintu, iyada oo dhiirigelinaysa, ayaan weli la ansixin inta wax -ka -beddelka lagu samaynayo lagana doodi doono Guurtida ka hor inta aan la dhammaystirin oo aan si rasmi ah loogu ansixin. Talyaaniga horeba u lahaa hab dadweyne oo si xasilan u dabacsan xashiishadda, taas oo u oggolaanaysa iibinta 'iftiinka xashiishadda'. Xashiishaddaan ayaa leh noocyo aad u sarreeya CBDwaxyaabaha ka yar 0,6% THC waxaa lagu iibiyaa dukaamada nooca farmashiyaha ee dalka oo dhan.
Daraasad 2019 ah oo ay samaysay Jaamacadda Magna Graecia, Université Catholique de Louvain iyo Erasmus School of Economics ayaa muujisay in la wareegista bilayska ee xashiishadda sharci-darrada ah ay hoos u dhacday faafidda "iftiinka xashiishadda", oo ay weheliso hoos u dhigidda qabashada dambiyada la xiriira daroogada.
U oggolaanshaha dhirta xashiishadda ee guriga lagu beero waa inay yareysaa dambiyada daroogada ee Talyaaniga (afb.)
Daraasaddu waxay soo jeedisay in suuqan sharciyeed ee sii kordhaya uu ka qaatey gacanta kooxaha burcad-badeednimada abaabulan qiyaastii $ 90-170 milyan sannadkii. Oggolaanshaha in xashiishadda lagu beero guryo yar waxay sii yareyn doontaa faafitaanka xashiishadda dambiyada keenta waxayna u oggolaan doontaa muwaadiniinta dalka inay helaan xashiishadda iyaga oo aan ka cabsi qabin in dacwad lagu soo oogo.
Ilaha ay ka mid yihiin ANSA (IT, DailyMail (EN), Madax banaan (EN), caleen leh (EN)
Kooxda Cannabis-ka ayaa gacanta ku dhigay daroogo qiimahoodu gaarayo $ 178 milyan waxayna xireen 78 dukaan oo xashiish ah
Kooxda fulinta ee Kanadiyaanka - Kooxda Wadashaqeynta Ciidamada Xad-gudubka Xashiishadda (PJFCET) - ayaa ...
Magaalada Tel Aviv, weed ayaa cirka ka soo dhacaya
A uubs dadka qaar ee Tel Aviv waa ku fikiray. Shalay ayaa duulay ...
Cannabis sariirta ku fiican? Waxay huriyaan hurdo qoto dheer iyo nasasho.
Shirkadda Devan Chemicals waxay soo saartay daaweyn dhar cusub oo ku saleysan xashiishadda laga ...
Snap wuxuu bilaabay aaladda app-ka ee halista daroogada ka dib dhimashadii fentanyl
Isticmaalayaasha xashiishadda ee CBG-ga u badan ayaa ka warbixiya waxtarka xanuunka iyo xaaladaha kale
Bukaano badan oo qaba kansarka naasaha ayaa isticmaala xashiishadda laakiin uma sheegaan dhakhtarkooda
Muusikadu waa qayb lagama maarmaan u ah daaweynta psilocybin, daraasaddu waxay soo jeedinaysaa